Manao ny Andranomafanan’i Japana ho sakaizan’ny vondrom-piarahamonina LGBT kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2018 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Português, Ελληνικά, Español, 繁體中文, English
Ireo olona milaza ny tenany fa lehilahy mankafy ny fandroan'ny mpanova taovam-pananahana ao Beppu, Japana. Pikantsary avy amin'ny NHK / YouTube..
Miezaka mitady fomba iray ahafahana mametraka ny iray amin'ireo fialam-boly malaza indrindra iarahan'ny olona mihevitra ny tenany ho LGBT ao amin'ny firenena ny “renivohitry ny ranomafana” ao Japana, raha nosarahana kosa ny ankamaroan'ny toeram-pandroana araka ny zava-misy roa fototra na “lehilahy” na “vehivavy”.
Fisantarana andraikitry ny tanànan'i Beppu, miorina ao amin'ny prefektioran'i Oita ao atsimo-andrefan'ny nosy Japoney, Kyushu, ny Rainbow Furoject (‘furoject’ dia teny natambatra avy amin'ny teny japoney hoe ‘fandroana”, ofuro, お 風 呂, sy tetikasa ‘).
Ny 1 May 2018, olona 40, anisan'izany ireo mpikambana ao amin'ny vondrona LGBT sy ireo mponina ao Beppu no niaraka tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana ranomafana iandraiketan'ny kaominina mba hiarahana mandro sy hisaintsainana hevitra hanamorana kokoa izany ho an'ny olona mihevitra ny tenany ho LGBT ary mba hankafy handro amin'ny ranomafana ao Japana.
Nahafinaritra ny fandefasana mivantana ny #RainbowFuroject omaly alina tao amin'ny #TenGoChan (NHK Ten5 na Fantsona 1.5) .
Mba hanampiana amin'ny famaliana ny fanontaniana hoe “inona no azontsika atao mba hiantohana ny tsirairay ho afaka mankafy milona ranomafana?”, mba tsy hampizarazara ireo olona mandro ho sokajy roa (lahy sy vavy), fa mba hifanaraka amin'ny karazana telo tiany: ahoana ireo “ankoatra izay”, ahoana no ahafantarana ny karazan'ilay olona amin'ny antontan-taratasy ofisialy, ary amin'ny ara-nofo inona no hamantarana ny tena.
Araka ny voalazan'ireo mpikarakara ny hetsika, sarotra ho an'ny mpikambana maro ao amin'ny vondrona LGBT, indrindra ireo izay milaza ny tenany fa trans (mpanova taovam-pananahana) ny hankafy tsotra ny fandroana iombonana. Saika misaraka hatrany ho “lehilahy” sy “vehivavy” ny toeram-pandroana sy ny ranomafana any Japana, tsy misy fankatoavana ny fahatsoran'ny karazana (genre) (lahy/vavy/sns…).
Ny fandroana amin'ny ranomafana na fandroana iraisana dia manana anjara toerana lehibe amin'ny kolontsaina Japoney. Tombanana ho 27.000 eo farafahakeliny ny ranomafana ampiasaina any Japana, ary ny 3.500 amin'izy ireo dia ao amin'ny prefektioran'i Oita, ny maro indrindra isaky ny prefektiora. Toerana fanaovana vakansy malaza ao Japàna arivo taona, farafahakeliny, ny tanànan'ny ranomafana toa an'i Beppu, ahitana trano fandraisam-bahiny marobe antonona ny safidy (na nahandro) sy ny teti-bola rehetra.
Ankoatra izany, hampiasa ireo fandroana ranomafana iraisana ny ankamaroan'ny kaominina mba ahafahan'ny mponina ao an-toerana mba haka aina sy hilona, miaraka amin'ny fianakaviana, namana na mpiara-miasa.
“Beppu-shi – 別府市” avy amin'ilay mpisera Flickr Thomas. Avy ao amin'ireo hôtely isan-karazany misy ranomafàna ao an-tanàna ny andiana etona. Lisansa: CC BY-NC 2.0.
Niezaka hatrany nametraka paikady isan-karazany amin'ny fisarihana mpitsidika i Beppu, ao Oita iray amin'ireo tanànan-dranomafana malaza indrindra ao Japana, anisan'izany ny fananganana zaridaina manana lohahevitra toeram-pandroana sy ny fanombohana fanentanana seraseram-bahoaka ho an'ny toeram-pialan-tsasatra ahitana mpilomano Olaimpika anaty ranomafana.
Tamin'ny 1 Mey no nampiantranoan'ny Kitahama Onsen Termas, ranomafana fampiasa isan'andro iandraiketan'ny tanàna ny LGBT Furoject. Notantarain'ny fantsona TenGo, izay anisan'ny haino aman-jerim-pirenena NHK ao Japana manokana ny hetsika; ary notantarain'i Oguni Shiro, mpanatontosa fandaharana ao amin'ny NHK sady mpanao famakafakana izay nanatrika sy nitatitra ny hetsika tao amin'ny Forbes Japan.
Mandritra ny andro, nokarakaraina tamin'ny lohahevitra telo ny fiarahana mandro: ny fomba fahatongavan'ny mpandro, tsy ijerena ny maha-lahy sy vavy tamin'ny fahaterahana; ny karazana ao amin'ny mari-panondroana ofisialy ara-panjakana; ary ny fandraisan'izy ireo ny tenany (lahy/vavy/…).
Ny vokatr'izany dia nanokafam-baravarana ny mpandray anjara hanavatsava sy hahatakatra ny zavatra iainan'ireo olona mpanova taovam-pananahana (trans) sy ny olona sady tsy lahy no vavy mankafy ny fandroana ranomafana any Japana, izay tsy maintsy isafidianan'ireo mpandro raha handeha eny amin'ny fandroana ho an'ny “lahy” na “vavy” ry zareo. Nandritra ny tontolo andro, afa-nanararaotra nizara ny fandroana ny mponina ao Beppu ka nampivelatra ny fifandraisana amin'ireo mpikambana ao amin'ny LGBT nasaina nanatrika ilay hetsika.
Ny tanjona tamin'io andro io dia ny hahitan'ny vondrona fomba hametrahana fandroana iarahan-ny vondron'olona ao Japana mba ho iraisana kokoa ho an'ny olona rehetra (na lahy na vavy na pelaka, sns). Araka ny voalazan'i Oguni Shiro, nanoratra tao amin'ny Forbes, nampidirina ny hevitra sasantsasany hametraka ny fandroana ho naman'ny LGBT kokoa, fa tsy manavaka ny fandroana arakaraka”lahy”/”vavy”, mampisaraka ireo mpandro araka ny sokajin-drà (lohahevitra manan-danja ao Japana) .
Hevitra hafa nampidirina ny famantarana milaza ny toerana fandroana ho “naman'ny LGBT”, tahaka ny trano sasany any Japana izay fantatra amin'ny hoe “sakaizan'ny biby fiompy” na “naman'ny tombokavatsa” (matetika voaràra eny amin'ny fandroana iraisana ao Japana ny olona misy tombokavatsa). Hevitra iray hafa ny hoe tokony hampiditra mpikambana ao amin'ny vondrona LGBT ho mpiasa ireo toeram-pialan-tsasatra ranomafana mba hanampy hahatonga ny fandroana ho mampiditra ampahan'olona betsaka kokoa.
Ankoatra ny fanomezana fahafahana hisaintsaina hevitra, tamin'ny 1 May ny Furoject dia namela ireo mpandray anjara sasantsasany ihany koa mba handray anjara amin'ny fialamboly Japoney tena mahaliana: mandro am-pahibemaso.
Nantsafain'ny NHK, mpandray anjara iray sady mpandro, lehilahy izay nanao fandidiana taovam-pananahana, nilaza fa vao maraimbe ihany na hariva be ihany izy no afaka mankany amin'ny fandroana iraisana, rehefa vitsy dia vitsy ny olona mety handinika azy eny amin'ny fandroana .
Mpandray anjara hafa nilaza hoe:
“(Amin'ny maha-lehilahy izay nolazaina fa vehivavy tamin'ny nahaterahany), raha nandro tamin'ny toerana natokana ho an'ny lehilahy (tao amin'ny Furoject ao Beppu tamin'ny 1 Mey), tsy nisy olona nahatsiaro ho tsy mahazo aina mihitsy. Ity no fotoana voalohany nidirako tamin'ny fandroana iraisana tao anatin'ny 13 taona, nahafaly ahy tanteraka izany! “
Ny fandaharana manontolo ao amin'ny NHK TenGo momba ny hetsika dia azo jerena ao amin'ny Youtube amin'ity rohy ity (amin'ny teny Japoney ihany), nanatrika ny hetsika ihany koa ilay bilaogera YouTube Kazue-chan ary nanao lahatsary bilaogy (amin'ny teny Japoney ihany koa).